Bible Mu Nsɛm Nsuyiri Kɛse No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ADAKA no akyi no nkurɔfo kɔɔ so yɛɛ wɔn ade sɛnea wɔyɛ daa no. Wɔannye anni sɛ Nsuyiri no bɛba. Ebetumi aba sɛ wɔserewee kɛse mpo. Nanso ankyɛ na wogyaee serew.
Mpofirim ara nsu fii ase tɔe. Efi soro hwie gui te sɛ nea wɔrehwie nsu afi bokiti mu. Na Noa asɛm no yɛ nokware! Nanso na aka akyiri dodo sɛ obi foforo bɛkɔ adaka no mu. Ná Yehowa ato pon no mu denneennen.
Ankyɛ na nsu kataa mmeae a ɛba fam no nyinaa so. Nsu no bɛyɛɛ sɛ nsubɔnten akɛse. Etutuu nnua guu fam na epiapiaa abo akɛse ma ɛyɛɛ hoo. Ehu kaa nkurɔfo no. Wɔforo kɔɔ mmepɔw so. Wɔn yam a anka wotiee Noa na wɔkɔɔ adaka no mu bere a wɔntoo mu no! Nanso na aka akyi dodo.
Nsu no kɔɔ so yirii bere nyinaa. Nsu tɔe adaduanan, awia ne anadwo. Na awiei koraa no ɛkataa mmepɔw a ɛkorɔn sen biara mpo so. Enti sɛnea na Onyankopɔn aka no, nnipa ne mmoa a wɔankɔ adaka no mu nyinaa wuwui. Nanso obiara a ɔwɔ adaka no mu nyaa nkwa.
Noa ne ne mma no bɔɔ mmɔden pam adaka no yiye. Nsu no maa so, na ɛtaa nsu no ani. Afei da koro, bere a nsu no gyaee tɔ no, owia no puei. Na ɛyɛ hu! Ná nsu nkutoo na wohu wɔ baabiara. Na ade ara a wotumi hu nso ne adaka a ɛtaa ani no.
Na nnipa abran no kɔ. Na wɔrenhaw nnipa bio. Na wɔn nyinaa awuwu, wɔne wɔn maamenom ne nnipa bɔne a aka no nyinaa. Na dɛn na ɛbaa wɔn papanom so?
Na nnipa abran no papanom nyɛ nnipa te sɛ yɛn. Na wɔyɛ abɔfo a wɔayɛ wɔn ho nnipa abɛtra asase so. Enti bere a Nsuyiri no bae no, wɔne nnipa a aka no anwu. Wɔworɔw honam nipadua a na wɔafa no guu hɔ na wɔsan kɔɔ soro sɛ abɔfo. Nanso wɔamma wɔn kwan amma wɔankɔ Onyankopɔn abɔfo abusua no mu bio. Enti wɔbɛyɛɛ Satan abɔfo. Bible mu no wɔfrɛ wɔn adaemone.
Afei Onyankopɔn maa mframa bɔe, na nsu no fii ase sɛ ɛretwetwe. Asram anum akyi no adaka no besii bepɔw bi atifi. Nna pii twaam bio, na afei de na nnipa a wɔwɔ adaka no mu no tumi hu mmepɔw ahorow atifi. Nsu no kɔɔ so twee nkakrankakra.
Afei Noa maa anomaa tuntum bi a wɔfrɛ no kwaakwaadabi pue fii adaka no mu. Ɔkɔ kakra a na wasan aba, efisɛ na onnya baabi pa nsi. Ɔkɔɔ so yɛɛ eyi, na bere biara a ɔsan bae no obesii adaka no so.
Noa pɛe sɛ ohu sɛ nsu no atwe anaa, enti ɔsan maa aborɔnoma pue fii adaka no mu. Nanso aborɔnoma no nso san bae efisɛ wannya baabi pa ansi. Akyiri yi Noa ma ofii adi bio na ɔsan bae a na ngodua ahaban tua n’ano. Enti Noa hui sɛ nsu no atwe. Noa maa aborɔnoma no fii adi ne mprɛnsa so na saa bere yi de onyaa baabi pa trae.
Afei Onyankopɔn kasa kyerɛɛ Noa. Ɔkae sɛ: ‘Fi adaka no mu. Wo ne wo fifo ne mmoa no nyinaa.’ Ná wɔatra adaka no mu bɛboro afe. Enti yetumi hu anigye ara a wonyae sɛ wofii adaka no mu puei a na wɔwɔ nkwa mu!
Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Petro 3:19, 20.
Bere a nsu fii ase tɔe no, adɛn nti na obiara antumi ankɔ adaka no mu bio?
Nna dodow ahe na Yehowa maa nsu no tɔe awia ne anadwo, na eyiri koduu he?
Bere a nsu no fii ase kataa asase so no, dɛn na adaka no yɛe?
So abran no nyaa nkwa wɔ Nsuyiri no mu, na wɔn papanom nso ɛ?
Asram anum akyi no, adaka no yɛɛ dɛn?
Adɛn nti na Noa maa kwaakwaadabi pue fii adaka no mu?
Ɛyɛɛ dɛn na Noa hui sɛ nsu a ɛwɔ asase so no atwetwe?
Noa ne n’abusua no traa adaka no mu bɛboro afe biako no, asɛm bɛn na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no?
Kenkan Genesis 7:10-24.
So nnipa ne mmoa bi kaa asase so wɔ ɔsɛe no akyi? (Gen. 7:23)
Nna ahe na edii ansa na Nsuyiri no nsu retwetwe? (Gen. 7:24)
Kenkan Genesis 8:1-17.
Dɛn na ɛwɔ Genesis 8:17 a ɛma yehu sɛ adwene a Yehowa de bɔɔ asase no ansesa? (Gen. 1:22)
Kenkan 1 Petro 3:19, 20.
Bere a abɔfo bɔne no san kɔɔ soro no, atemmu bɛn na wonyae? (Yuda 6)
Ɔkwan bɛn so na Noa ne n’abusua ho asɛm yi ma yenya awerɛhyem kɛse sɛ Yehowa betumi agye ne nkurɔfo? (2 Pet. 2:9)